उद्योगमन्त्री पाण्डेको गाडीले तेलको लाइन मिचेपछि तनाव-Nagarikaawaj.com
उद्योगमन्त्री पाण्डेको गाडीले तेलको लाइन मिचेपछि तनाव
बुधबार बिहानको पौने १२ बजे : नयाँ बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्स पेट्रोलपम्प । बिहानै तीन बजेदेखि नै पेट्रोल भर्न बसेका सवारीसाधनको लामो लाइन । एकाएक उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे चढ्ने झन्डावाला बा.१ झ ८२२९ नम्बरको कालो रङको प्राडो हुइँकिँदै आयो ।
सर्वसाधारणको लाइन मिच्दै आएको प्राडो गाडी सीधै पेट्रोलपम्पभित्र छिर्न खोज्यो । लाइन बसेका सर्वसाधारणले विरोध जनाए । नजिकै रहेका लाइन व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीले रोक्न खोजे । तर, चालक रोकिने मुडमा देखिएनन् । एक्सिलेटर बेस्सरी थिच्दै जबर्जस्ती भित्र छिर्न खोजे ।
प्रहरी निरीक्षक सामुन्ने उभिएपछि फुर्तीसाथ छाती फुलाउँदै मन्त्रीका चालक गाडीबाट बाहिर निस्किए । खल्तीबाट मोबाइल फोन झिके र मन्त्री पाण्डेलाई फोन लगाए । प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेको नजिक पुगेर हप्काउँदै प्रश्नहरूको वर्षा गरे, ‘यो गाडी कसको हो थाहा छ ? उद्योगमन्त्रीको नाम सुन्नुभएको छैन ? मन्त्रीज्यूको गाडी रोक्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? मन्त्रीको गाडीले पनि सर्वसाधारणले जस्तै लाइन कुरेर तेल हाल्नुपर्छ ?’ अन्तिममा उनले भने, ‘बाटो छोड्नुस् । म तेल हालेर जान्छु ।’
तर, उनी बानेश्वर वृत्त नपुग्दै मन्त्री पाण्डेको सचिवालयबाट टेलिफोनको घन्टी बजिसकेको थियो । डिएसपी नारायणप्रसाद चिमोरियालाई मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले फोन गरेर दबाब दिइसकेको थियो । माथिको दबाब आएपछि डिएसपी चिमोरियाले चालकलाई सामान्य सोधपुछ गरेर केहीबेरपछि गाडीसहित छाडिदिए नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।